🥇 ▷ El Capitan, astaamaha OS X cusub ee Mac ✅
El Capitan, astaamaha OS X cusub ee Mac
Apple waxay soo bandhigaysaa astaamaha cusub ee OS X El Capitan
Mid ka mid ah wararka ugu xiisaha badan ee lagu soo bandhigay WWDC 2015 waa nooca cusub ee OS X El Capitan kombiyuutarada Mac, nidaamka cusub ee qalliinka kombiyuutarada oo u imaan doona si bilaash ah dhammaan aaladda Mac-haqata. Waxaa hadda diyaar u ah soosaarayaasha, beta-ga dadweynuhu wuxuu bilaabmayaa Luulyo soo socota, soosaarka rasmiga ahna wuxuu noqon doonaa xilliga deyrta. Si aad kor ugu qaaddo El Capitan, marka la heli karo, waa inaad si toos ah uga soo degsataa xirmada tooska ah ee ‘App App Store’ oo aad bilawdaa inaad ku raaxaysato muuqaalada badan ee cusub ee nidaamkan cusub ee qalliinka u keenaya Apple.
Miis aad u abaabulan
Mid ka mid ah astaamaha cusub ee OS X El Capitan waa in si dhakhso leh loo abaabulo soo bandhigida daaqadaha furan ee desktop-ka. Adigoo isbadbaadin deg deg ah dhammaan daaqadaha furitaanka si otomaatig ah ayaa loo abaabuli doonaa si ay u arkaan waxa ku jira si nadiif ah, iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin.
Haddaba markii la calaamadeynaayo boggaga xiisaha leh ee nooca Safari ee loogu talagalay Mac waxayna u muuqan doonaan qaab muuqaal ah oo soo jiidasho leh, oo la mid ah sumadda yar ee labajibbaarane ah hoosta cinwaanka cinwaanka si helitaanka degel internet gaar ah ay aad uga dhakhso badan oo xarrago leh, iyadoo aan lahayn Waxaad dhex martaa inta u dhexeysa liisaska aan dhamaadka lahayn ee calaamadaha ama buugga-calaamadaynta.
Shaashad kala fur shaashadda
Qaabkan cusub ayaa si otomaatig ah ula jaan qaadaya laba dalab si ay ula shaqeeyaan iyaga isla mar ahaantaana shaashad kala go ‘ah, iyada oo aan gacanta lagaa beddelin cabbirka daaqadaha si ay ugu habboon yihiin qalabka kormeeraha.
Ogeysiisyada hodanka ah
Loogu talagalay kuwa jecel Evernote iyo barnaamijyada la midka ah, OS X Notes cusub iyo sidoo kale kuwa iOS 9 hadda waxay ku daraan howlo cusub, liistada isweydaarsiga illaa sawirrada, oo leh aalado cusub si loogu daro sawirrada, fiidiyeyaasha iyo isku xirka dhammaan qoraaladaada ka dhexeeya aaladaha kala duwan ee Apple.
Haddii aad leedahay tabooyin badan oo furan oo mid ka dhigaya qaylo ka mid ah walxaha xamuulka ah (fiidiyow, muusig muusig, xayeysiis, iwm.), Hada waad uqaawin kartaa si madaxbanaan inaad kusii waddo xayeysiiso si raaxo leh oo aan codkaaga ku dhibin inta lagu gudajiro.
Ha moogaan dhamaan astaamaha iOS 9, Halkan.
Birta loogu talagalay Mac
Hadda birta hadda uma eka macruufka. Soo saareyaasha ciyaarta fiidiyowgu waxay u naqshadeyn karaan cayaaraha Mac iyagoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda birta si ay u gaaraan 50% xawaare kordhin ah iyagoo uga mahadcelinaya tikniyoolajiyadda noocan ah ee loogu talagalay soosaarayaasha naqshadeeyayaasha Mac.
Hagaajinta raadinta waxyaabaha ku jira
Hada Spotlight waxay isticmaashaa luuqad si wada jir ah loo adeegsado waxayna adeegsadayaashu ka raadin karaan macluumaadka internetka iyo sidoo kale kumbuyuutarka iyagoo adeegsanaya weedho la wada leeyahay, sida “dukumiintiyada cake ee aan qoray bishii hore.” Heerka kobcinta baarista waa mid ka mid ah horumarada ballaaran ee ay soo jeediyeen OS X El Capitan cusub.
Horumarinta Boostada iyo Khariidadda
Laga soo bilaabo isticmaalka tilmaamaha si loo xakameeyo dhinacyo kala duwan oo ah emaylkaaga illaa astaamo cusub oo lagu daray Khariidadaha sida tilmaamaha jidadka gaadiidka dadweynaha. Apple Waxay ka shaqeysaa inay ka dhigto noocaan cusub ‘OS OS X’ qalab sax ah oo loogu talagalay socotada iyo guud ahaan adeegsadaha.
Waligaa kuguma dhicin adiga inaadan helin habaar markii aad toosiso shaashadda Mac? Hadda OS OS cusub El Capitan wuxuu ballaadhinayaa qafiska si ku meel gaar ah adoo ku dhaqaajinaya shaashadda si aad si dhaqso leh uga heli karto.